Qof waliba oo soomaali ah, wuxuu xaq u leeyahay in uu ka qayb galo shir ama uu qabto shir. Shirarku waa labo midood. Mid wanaag iyo horumar wata ama mid xumaan iyo dhib wata. Labadabba qofku wuu qaban karaa wuuna ka qayb galikaraa. haddii uu wanaag soo kor dhinayo wuxuu dan u yahay dalka iyo dalka . siddaa awgeed waxaa loo bahanyahay in la soo dhaweeyo, haddii uu xumaan iyo dhibaato keenayana, waa in hogaanka dalka iyo dadkuba ka hortagaan si xigmadaysan.
Shirka Nairobi waxay ahayd, in la qabto shirar horre si uusan u dhicin shirkaasi. Dhaleecaynta, dulduleeladda. waa wax loo bahanyahay si looga faa idaysto, oo meelaha aa dul duleelka ah, loo dhamaystiro. Haddii ay dhici waydo, oo wax waliba lagu soo koobo 3 shakhi iyo mid siyaaddo ah kuwaas oo hal meel wax ka arka, waxaa fufudaanaysa, qof waliba in uu ku damaaciyo ama uu ku ha waysto.kana faaidaysto jileecaaga.
Haddii aad haysato xeedho rashin ka buuxo, dadka kugu hareeraysana baahanyihiin, adiguna aad la sii jeesato, waad garankartaa, waxa kaaga imankara. Meel haddal kaaga bahana, haddii aad feer iyo haraati xal moodo, kuuna durbaan tumaan, kuwa kugu hareeraysan, kuwaas oo dhaqan u leh, qabyaalad iyo burbur . jawaabta aad hesho ama aad fili karto waa: feer,haraati iyo waliba suxul.haddii uu arinku sidaa noqdo waxaa meesha ka baxaya in wax la wada wadaago. Sidaa awgeed waa in la helaa xal ka duwan kaas aan soo sheegay, si loo gaadho xal, loona wadaago xeedhada rashinka ah.
Awood balaadhan, una baahan in la baahiyo, haddii aad ku koobto dhawr qof, waxaan shaki kujirin in wax badan oo la qaban lahaa, ay dayac mayaan. Mar aan milicsaday shir ay lahayeen wasiirada arimaha dibbada ee jamacada carabta , ayaan is waydiiyey aaway wasiirkenii arimaha dibada, waxaa la igu yidhi waa dumaroo carabtii ayaa diiday, su aasha igu soo dhacday ayaa waxay ahayd oo ma rag la,aan ayaa nahaysa?.macnaheedu ma ahan , dumarka in la riixo, ama wax qaybsiga laga qadiyo. Dumarku waa hooyada dhashay nin waliba oo wanagsan.
Waxaa kaloo mudan is tultaag. Midi afbadan, xageeda danbana ka xoogan, suro gal aytahay in aad mididaa ka taqalusta, balse aysan suuro gal ahayn salkeeda danbe in aad burburiso , labo arimood xaq ayaad u lahayd. Mididada in aad la macaamisho, si taxadar leh. Ama in aad salkeeda danbe la macaamisho si iyadana taxadar leh. Adigoo ah wiil yar oo gur guurad barad ah, haddii aad is moodo in aad ordikarto, waa riyo aan jiif ahayn. Wax badan oo aan haboonayn, ayaa u baahan qiimayn iyo tanaasul si aysan meel xun ugaadhin, oo aan wax laga qabankarin. Waa lagugu hareeraysan yahay , waan lagugu dhex jiraa labaduba waxay u baahantahay in aad ula socoto si taxadar leh.
Dalkanu wuxuu burbursanaa ku dhawaad 23sano,walina waxaa nool dadkii wax ka burburiyey, waxaa kaloo jira dalalkii ka qeeyb qaatay burburkiisa, waxaa kale oo aan la inkiri karin in ay jiraan sababihii bur burka keenay oo taagan. Ma dhib yara waxaas oo dhan, in ay sanad iyo sanado lagu xaliyo. Balse waxaa ka sii naxdin badan, haddii madaxdii dalka ay fahmi wayaan xalka, oo dalka iyo dadka sii kala fogeyaan oo ay meshii u baahnayd in la dhayo ay uga sii daraan, taasina waa ay muuqatay intii ka danbaysay dawladdii dhexe 1991. Dawladihii na soo maray, markii ay wax qaban wayeen, ayeey sii shideen xalada.
natiijadooduna ay noqotay, mid waliba in uu dadkiisa isku koobo. Wixii hanti ahaa ee dadku lahayeena jeebka uu ku shubto.
Waxaa kaloo mudan til maamid. Lataliyaasha madaxda ee aqoonta leh, intooda badana nooga yimid reer galbeedka ama carabta, ee sida dhabta ah aan u fahmi karin dhibaatada bulshada ama xanbaarsan fikir kale .waayo xiligii burburka wuuba ka maqnaa dalka, oo nolol ayuu haystay, maanta in uu usoo xidho garabaati, dadkana uu ula macaamilo sidii reer galbeedkii ama khaliijka, waa wax aan suuro gal ahayn. Dadka nocaas ah in ay xal kenaan. cilmigooda waxaa kamihiimsan kan ka aqoonta yar, ee laga helay labo arimood, koow: daacad nimo labbo: wacyiga dadka oo uu uleeyahay aqoon, iyo dhaqanka bulshada . Aqoontu waa wax loobahanyahay, aqoon la,aanu waa iftiin la aan. Balse dad jahiliin ah, oo aan fahmikarin xisaabta Aljabra iyo cilmiga falaga, u baahan biyo,cunto,cafimaad,nabadgalyo iyo wax barasho aas aasi ah. Mantoo dhan cirka iyo dayaxa gacmeedka haddii aad uga sheekayso. Waxaan filayaa jawaabtadu in ay isugu soo aruurayso in lagaa wada cararo ama laguu arko nin waxi ka qaldan yihiin.
Shirka Nairobi waxaa ka muuqda cardho iyo dhaliil xoogan oo loo soo jedinayo dawladan curdunka ah.balse dadka soo jedinaya waa ku wama? Jawaabta waxaa laga sugayaa soomaalida. Waxaa kaloo ka cad silsilad isku xidhan ilaa iyo Kampala,Nairobi iyo Muqdisho. Shirkanu ma wuxuu noqon donaa Jubbaland oo kale, oo dawladu siddii looga bartay weerer ayeey ku qaadi doontaa mise dhib iyo weerar jubbaland ayaa ugu filan ee si siyaasadaysan oo taxadar leh ayeey isha ugu hayn doontaa? Jawaabtu waxay u talaa Aqalka Madaxtooyada.
Qorre: Cabdicaziz Bashir Ashkir.
Faafin: SomaliTalk.com | July 17, 2013
Madaxweynaha Dawladda Federaalka oo Ku Andacoodey in Dhul-badeedka Soomaaliya yahay 12 mayl, isagoo iska indha-saabaya Xeerkii Badda Soomaaliya